Dadka reer Algeria ee ku xaniban dibedda, dhibaatadii ayaa sii socota - Jeune Afrique - TELES RELAY
Dadka reer Algeria ee ku xaniban dibedda, dhibaatadii ayaa sii socota - Jeune Afrique
21 fikradood oo beddeli doona Afrika sanadka 2021
Shirkadda ayaa hakineysa howlihii dib u celinta ee ay billowday bishii Diseembar ee la soo dhaafay. Ku xaniban dibedda tan iyo bishii Maarso 2020 dhibaatada caafimaad awgeed, muwaadiniinta Algeria waxay u arkaan rajada dib ugu laabashada dalkooda wax yar ka sii yaraanaya.
Gargaarka wuxuu ahaa mid kooban. Hawlgalka dib-u-celinta, oo sugayay muddo ku dhow hal sano illaa 25 oo muwaadiniin Algerian ah oo ku go'doonsan dibedda sababo la xiriira xiritaanka xuduudaha Algeria bishii Maarso ee la soo dhaafay, ma dhammaan doono dhamaadka. Waxaa bilaabay Air Algérie Diseembar 23, 2020 waxaana loo qorsheeyay illaa Janaayo 31, 2021, waa la hakiyay ilaa amar dambe. Barnaamijka waxaa laga waday shan dal oo kala ah Faransiiska, Isbaanishka, Jarmalka, Kanada iyo Isutagga Imaaraatka Carabta.
Maamulka shirkada ayaa ku faafay erey gudaha ah kaas oo ay ka codsanayaan wakiiladeeda iibka inay u soo bandhigaan ikhtiyaarro cusub macaamiisha horey u heystay tikidhada mudada 8 Janaayo ilaa 31 Janaayo. Iyaga dhexdooda, beddelka taariikhda. Isticmaalka magdhawga ayaa kaliya lagu xusay ikhtiyaarka ugu dambeeya.
Ilo dhowr ah ayaa sheegaya in go’aanka ay soo rogeen masuuliyiinta ugu sareysa dalka, laakiin ma jiro xiriir rasmi ah oo la sameeyay.
Si kastaba ha noqotee, ma jiro faahfaahin ku saabsan sababaha xukunkan. Sababaha nooma sharaxayaan, amar uun bay na siinayaan, ”ayuu u sheegay maareeyaha.Air Algeria. Ilo wareedyo dhowr ah ayaa sheegaya in go’aanka ay soo rogeen masuuliyiinta ugu sareysa dalka, laakiin ilaa iyo hada ma jiro xiriir rasmi ah oo la sameeyay.
Masaafurin qasab ah
In kasta oo uusan jirin war qoraal ah, warka wuxuu bilaabayaa inuu ku dhex faafo qaar ka mid ah warbaahinta internetka iyo shabakadaha bulshada. Waxay ku urursan yihiin kooxaha Facebook ee tobanaan kun oo xubnood ah, Aljeeriyaanka musaafuriska qasabka ah ku luminaya samirkii. Aamusnaantii guud ee shirkadda Air Algeria iyo mas'uuliyiinta. Xaqiiji joojinta ama diidso laakiin wax samee, ayay tiri Yasmine, oo reer Toulouse ah. Waan yaabay. Aad baan ugu xanuunsanahay xaaladan oo ma doonayo in mar dambe la i celiyo, ”Sarah ayaa xanaaqday. Waxay hadda ogaatay, wicitaan ka yimid Air Algeria, joojinta duulimaadkeedii dib u celinta ee la qorsheeyay inay Janaayo 17 ka bilaabato Montreal ilaa Algiers.
“Markii xuduudihii ay xirmeen bishii Maarso ee la soo dhaafay, xaqiiqdii ma ahayn xalka ugu fiican, laakiin waxaan muujinnay faham. Waan fahannay inay tahay inaan la dagaallano Covid-19, waan dulqaadnay, laakiin ma fileynin inay socon doonto 11 bilood! »Wuxuu ka xumaaday Samy *, oo ah muwaadin Algerian ah oo ku xayiran Paris. “Tani waa xadgudub! Markii hore, waxaa na dajin karayey ehelo, laakiin sanad maahan, waa wax aan macquul aheyn. "
Iyagoo wajahaya xaaladan raagtay, qaar ayaa lagu qasbay inay qabtaan shaqooyin aan la shaacin iyo guryo
Iyagoo wajahaya xaaladan raagtay, qaar ayaa lagu qasbay inay qabtaan shaqooyin aan la shaacin iyo guryo. Tani waa kiiska Nassim *, 32 jir ah. Asal ahaan wuxuu ka yimid Bejaïa, wuxuu tagay Faransiiska muddo gaaban bishii Febraayo. "Safar shaqo," ayuu yidhi. Maalmo uun ka dib, Algeria waxay ku dhawaaqday in la xidhay xuduudeheeda si loo joojiyo faafitaanka coronavirus. Soddon iyo wax baa arkaa tikidhkiisii ​​laabashada oo la joojiyay. Wuxuu ku xayiran yahay Paris.
Nassim ma lahayn wax kale oo aan ka ahayn inuu guri sii kireeyo. “Waxaan bixiyaa 500 euro bishiiba aqal istuudiya oo ka kooban 14 m² oo aan la wadaago qof aan isla deganahay. Ma lihi suurtagalnimada in aan helo kaalmada gobolka, ama suurtagalnimada in aan shaqeeyo maadaama aanan halkan deggenayn. Lacag ayaa soo baxaysa laakiin wax soo galayaa ma jiraan ”. Si loo daboolo baahidiisa, wuxuu horey uga soo wareejiyay Algeria lacag u dhiganta 7000 euro. “Waxaan qaatay lacagtii aan urursaday, laakiin tan hadda suurtagal maahan, waxaan heysan karaa laba bilood oo kale ugu badnaan, ka dib waxaan mari doonaa waddooyinka. "
Qunsuliyadaha Algeria ee aan raaxo lahayn
“Waxaan qaaday dhamaan talaabooyinka mala awaalka ah: waxaan qoray emailo, qoyskeyga Algeria waxay aadeen si ay iiga diiwaan galiyaan liisaska wasaarada arimaha dibada halkaas, maalin walba waan wacaa… waxba ma jiraan. No soo noqosho Sida Nassim oo kale, waxay yihiin dhowr kun oo ay ku hor kulmaan qunsuliyadaha kala duwan ee Algeria si ay u dalbadaan caddaalad. Si aan micne lahayn. "Haddii si kadis ah aan ku aqbalno inaan ku qaabilno, waxaan kuugu jawaabeynaa isla weyni mana gebi ahaanba kaa caawin mayno", waxay ka qoomameysaa Myriam *, oo 57 sano jir ah, oo ku xayiran Marseille.
Hal shay ayaa umuuqda inay awood uleeyihiin inay furfuraan xaalada: lacag. "Haddii aad tigidh yar ka siibato qunsuliyadda, waxaad ka diiwaangashan tahay liisaska mudnaanta ee dib u celinta", wuxuu cambaareeyay Aziz Bensadek, xubin ka tirsan kooxda Marseille "Fur xuduudaha Algeria". Sheeko isku mid ah oo ku taal Paris: “Dadka ka diiwaangashan liisaska qunsuliyada oo lala xiriiray si ay uga baxaan waxaa loo diiday inay galaan diyaaradda hal mar garoonka diyaaradaha. Haddii ay bixiyaan, way dhaafaan, ”ayuu raaciyay xubin ka mid ah wadar ahaan muwaadiniinta Algeria ee ku xaniban Paris.
Haddii aad tigidh yar ku dhufato qunsuliyadda, waxaa lagugu dari doonaa liisaska mudnaanta u leh dib u celinta
Eedeymaha ay adagtahay in la cadeeyo, xittaa hadii JA ay awoodo inay hesho duubitaan taleefoon oo nin isku muujiya inuu yahay "dhexdhexaadiye qunsuliyada", wuxuu weydiisanayaa 2500 euro, nuqul baasaboor iyo lambar taleefan. "Waxaad wicitaan ka heli doontaa qunsuliyadda waxaana lagu celin doonaa toddobaad gudihiis," ayuu ballanqaaday. Wuxuu ku adkeysanayaa qaddarka: “Aniga ma ihi qofka hagaajinaya qaddarka, waxaan ahay dhexdhexaadiye oo keliya, ma jiro wax gorgortan ah oo suurtagal ah. Hadaad haysato 2500 yuuro ii soo dir. Haddii kale, looma baahna. "
Quus, qaar ka mid ah muwaadiniinta go'doonsan ayaa u oggolaanaya inay khiyaaneeyaan ikhtiyaarka. Qaar kale, oo nasiib yar, waxay ku gaaraan dalkooda iyagoo gacan ka helaya kuwa wax tahriibiya ee Tunisia. “Waxay raacaan duulimaad Paris-Tunis ah. Kadibna waxay lacag siiyaan dadka si ay ugu oggolaadaan inay ka gudbaan xadka Algeria. Waxay ku galaan dalkooda si sharci daro ah, waa fadeexo, ”ayuu yiri xubin ka tirsan kooxda Paris. "Adeegga" waxaa lagu soo dallacayaa "inta u dhexeysa 300 euro iyo 400 euro". - Ilaa iyo inta xuduudaha ay sii xirnaanayaan, waxay albaabka u furan tahay dhammaan dhagarta, ayuu yiri Aziz Bensadek.
Xaalad aan horay loo arag
Baahida xuduudaha furan ayaa hada ka batay dalabka muwaadiniinta. Horraantii Janaayo, Senator Abdelouahab Benzaïm iyo ku-xigeenka bulshada qaranka ee laga aasaasay dibedda, Noureddine Belmeddah, waxay warqad wadajir ah u direen madaxweyne Abdelmadjid Tebboune.
Waxay cambaareynayaan xaalad "weligeed aan la soo marin tan iyo markii xorriyadda la qaatay", halkaasoo "Aljeeriya looga baahan yahay inay helaan rukhsad ay dib ugu laabtaan dalkooda". Siyaasiyiinta ayaa madaxweynaha ka codsanaya inuu qaado "dhaqso iyo wax ku ool" tallaabo. Iyadoo, gaar ahaan, furitaanka xuduudaha dhulka, hawada iyo badda si loo oggolaado soo celinta dhammaan muwaadiniinta shuruud la'aan, marka laga reebo kuwa la xiriira borotokoolka caafimaadka. Iyo ka saarida "rukhsadihii hore iyo diiwaangelintii oo daalisay qof walba". Sida laga soo xigtay iyaga, way fiicnaan lahayd in "loo daayo Air Algeria iyo shirkadaha ajaanibta ah inay kaligood maareeyaan duulimaadyada Algeria".
* Magacyadii hore waa la badalay.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.jeuneafrique.com/1101726/societe/air-algerie-pour-les-algeriens-bloques-a-letranger-le-calvaire-continue/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux- rss & utm_campaign = rss-stream-young-africa-15-05-2018
Kristen Stewart Iyo Robert Pattinson saaxiibtiis arimaha, FKA Twig oo leh waqti fiican Guur la'aan - Video
Laga soo bilaabo diblomaasiyadda dagaalka ilaa baahida loo qabo nabadda - Jeune Afrique
Cardinal Pietro Parolin, Xoghayaha Arimaha Dibada ee Holy See oo looga dhawaaqay Bamenda